भारतीय संस्कार अनुसार बिहे गरेको भन्दै विवाद भएपछि प्रियंकाको यस्तो स्पष्टिकरण! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/भारतीय संस्कार अनुसार बिहे गरेको भन्दै विवाद भएपछि प्रियंकाको यस्तो स्पष्टिकरण!
फागुन १५ गते, बिहिबार जिल्ला अदालतमा गएर कानुनी विवाह गरेका थिए भने परम्परा अनुसार शुक्रबार बिहे गरेका थिए। उनीहरूले २ वर्षदेखिको गहिरो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् ।प्रियंकाको विवाहको रिसेप्सन पार्टीमा उनका आफन्त र चलचित्र क्षेत्रका प्राय सबै कलाकार, निर्देशक तथा निर्माताहरु सहभागी भएका थिए। उनलाई सामाजिक संजालमार्फत धेरैले विवाहको शुभकामना दिएका छन् ।
तर उनको विवाहलाई लिएर आ’लोचना गर्नेहरु पनि धेरै थिए । प्रियंका र आयुष्मान नेपालको सेलिब्रेटी भएर भारतीय संस्कार अनुसार विवाह गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा वि’वाद उत्पन्न भइरहेको थियो ।
सामाजिक संजालमा आफुहरुको विवाहलाई लिएर विभिन्न टि’का-टिप्पणी भएपछि प्रियंकाले यसबारे स्प’ष्टिकरणदिएकी छिन्। आफुलाई माया र स’पोर्ट गर्नेहरुको लागि यो स्पष्टिकरण दिएको भन्दै उनि लेख्छिन्, “हाम्रा दुवै परिवारको मातृ प’क्षलाई सम्मान गर्दै हामीले नेपाली र भारतीय दुवै परम्परालाई मि’साएर विवाह गरेका थियौ।
मेरो ममि र’क्षा म’ल्होत्रा आदि नेपाली र आदि प’न्जाबी हो । मेरो ममीपट्टिको हजुरबुवा पन्जाबी हो। हाम्रो परिवार अ’मृतसार र ह’रियाणामा छन्। त्यस्तै आयुष्मानको ममीको हजुरबुवा पनि प’न्जाबी हो। त्यसैले उनीहरुको देशराज थर भएको हो । त्यसैले बुझ्ने को’शिस गर्नुहोस, यसलाई नराम्रो रुपमा नलिनुहोला ।”
‘नेपालका एक मात्र महानायक राजेश हमाल’
सुशान्तलाई फिल्ममा नखेलाउने निर्णय गरेका सलमान, करणसहित ८ जनाबिरुद्ध मु-द्दा